Vamwe Vakashanda naVaMugabe Voti Havana Nhaka Yakanaka Yavasiira Nyika
Gunyana 06, 2019
Vaimbove mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa.
Vaive mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe vashaya mangwanani anhasi muchipatara che Gleneagles kuSingapore, uko vanga vachirapwa.
VaMugabe, avo vanga vave nemakore makumi mapfuimbamwe nemashanu ekuberekwa, vakaenda kuSingapore muna Kubvumbi wegore rino kunorapwa chirwere chisina kutsanangurwa, kunyange hazvo vaimboenda vachinorapwa zvirwere zvakasiyanasiyana kunyika iyi.
VaMugabe ndivo vakave mutungamiri wechitema wekutanga muna 1980 pakawana nyika kuzvitonga kubva kuvachena,kusvika vazobviswa pachigaro nemauto muna 2017.
Vakatungamirawo hondo yeChimurenga vari kuMozambique kubva muna 1975, uko bato ravo reZanu rairwisana nehutongo hwevaive mutungamiri weRhodesia, VaIan Douglas Smith riri.
Asi hutongo hwaVaMugabe hunonzi nevamwe hahuna kuzounza tarisiro yaive nevakawanda sezvo vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo, izvo zvinonzi zvakaita kuti nyika iende kumawere.
Hurumende yavo inopomerwa mhosva yekutungamira kubvutwa kweminda kubva kuvachena, kutyorwa kwekodzero dzevanhu, pamwe nekutsakatitswa kwevaivapikisa kana kufungidzirwa kuti vaipikisana navo.
Mumwe wevakashanda naVaMugabe kwenguva ndefu munguva yehondo, pamwe nekunge nyika yawana kuzvitonga kuzere, VaRugare Gumbo, ndemumwe wevanhu vanoti VaMugabe havana nhaka yakanaka yavasiira vana veZimbabwe kuburikidza nekutonga nedemo kwavaiita.
Vanoti nhaka yasiiwa naVaMugabe inhaka yekurwisana kwevanhu.
VaGumbo vanoti matongero aVaMugabe mushure mekunge nyika yawana kuzvitonga haana kusiyana nematongero avaiita munguva yehondo, sezvo vaishungurudza vavaifungira kuti vaipikisana navo mubato ravo reZanu nguvayo.
VaGumbo vanoti ivo nevamwe vatungamiri vemauto eZanla vakasungwa kuMozambique naVaMugabe vakagariswa mugomba kusvika nyika yawana kuzvitonga.
Vanotiwo mhosho huru yakaitwa naVaMugabe ndeyekurambira pachigaro pamwe nekusave nehurongwa hwekupa masimba kune vachiri kutemwa dzinobva ropa.
Asi VaGumbo vanoti kunyange hazvo VaMugabe vakanga vari munhu akaipa, panyaya yekuwanisa vana veZimbabwe dzidzo pamwe nekupa minda kuvatema vanovatenda zvikuru.
Hapana hurongwa hwati hwaziviswa hwekuti mutumbi waVaMugabe uchaendeswa kumusha riini, uye kuti vacharadzikwa kupi, sezvo vachinzi vakaramba kuvigwa kumarinda anovigwa magamba enyika, kuHeroes Acre.
Hurukuro naVaRugare Gumbo
Mizinda yeZimbabwe Yopihwa Zviuru Gumi zveMadhora ekuAmerica Kuti Muzinda Urwise Covid-19
Mutori weNhau, Grace Mutandwa, Ashaya
Zimbabwe Yorangarira Gamba reNyika, Doctor Joshua Nkomo
Vari Kudzokera Kumusha Vokurudzirwa Kutevera Zviga zveWHO Pakudzivirira Covid-19
Nyaya yeHurumende Yekuvhara Musika weZSE Yotemesa Musoro veMabhizimisi